Senator Muuse Suudi: ”Shacabka reer Muqdisho waxaa heysata laba dhibaato oo aad u xun” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Senator Muuse Suudi: ”Shacabka reer Muqdisho waxaa heysata laba dhibaato oo aad...
Senator Muuse Suudi: ”Shacabka reer Muqdisho waxaa heysata laba dhibaato oo aad u xun”
Senator Muuse Suudi Yalaxow /Photo: Screenshot Halqaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Senator Muuse Suudi Yalaxow, ayaa sheegay dadka reer Muqdisho inay haysato laba dhibaato oo ay ku dhex haysato gudaha magaalada Muqdisho.
Senatorka ayaa sheegay dhibaatada koowaad inay tahay bulshada oo aan haysan meel ay maraan, islamarkaana wado kasta lagu gooyay dhagxaan iyo caro, taasi oo Magaalada ka dhigtay mid go‘doon ah.
Dhibaatada labaad ayuu sheegay inay tahay canshuur fara badan oo laga qaado Bulshada xilli aysan haysan waddooyin ay maraan.
Madaxda Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay inay la yimaadaan qorshe la xiriira dhinaca Amniga loogana baahan yahay inay dadka reer Muqdisho ay wadooyinka u furaan.
Hay’adaha Ammaanka Soomaaliya ayaa u arkay wadooyinka dhagxaanta lagu jaray inay ka qeyb qaadan karaan sugida Amniga Caasimadda, hayeeshee Siyaasiyiinta mucaaradsan ay ku dhaliileen Madaxda Dowladda Federaalka.
reer Muqdisho laba dhibaato ayaa heysata
waddooyinka Muqdisho oo xiran meelkasta